ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလှဆင်ပါမယ်. | နတ်သမီး အလွမ်း
← ရင်သားကင်ဆာအတွက် ပန်းဂေါ်ဖီအစိမ်း
မြွေ နဲ့ စမ်းသပ်ခြင်း →
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလှဆင်ပါမယ်.
အရှက်အကြောက်ဆိုရာဝယ် အရှက်သည် တစ်ပိုင်း အကြောက်သည် တစ်ပိုင်းဆိုပြီး ကွဲသွားပါတယ်။ ဒါကို ပါဠိစာပေမှာတော့ ဟိရိ နဲ့ သြတပ္ပဆိုပြီး လာပါတယ်။ ဒီတရားနှစ်ပါးကိုပဲ လောကပါလတရားဆိုပြီး မြန်မာစကားမှာလာပါတယ်။ ဒီတရားနှစ်ပါးအကြောင်းကို ဣတိဝုတ်၊ သုက္ကဓမ္မသုတ်မှာ ဒီလိုပြောထားပါတယ်။ ဟိရိ= အတ္တာဓိပတေယျ= အဇ္ဈတ္တသမုဋ္ဌာန (ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်ခြင်း)၊ သြတ္တပ္ပ= လောကာဓိပတေယျ= ဗဟိဒ္ဓါသမုဋ္ဌာန (ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှက်ခြင်း)ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်တာဟာ ဟိရိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှက်တာဟာ သြတ္တပ္ပ ပါ။ ဒီနေရာမှာ အရှက်အကြောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားကလည်း ၄-ပါးဆိုပြီးတော့ လာပါသေးတယ်….။ အဲဒါကိုတော့ နောက်မှအသစ်ရေးပါတော့မယ်။ အခုတော့ “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းဟာ အများကို ကာကွယ်ခြင်းမည်တယ်။ အများကို ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်´´ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲ တင်ပြသွားပါမယ်။
ဘုရားဟောထားတဲ့ ၀တ္ထုလေးအကြောင်းပါ။ တခါက မျက်လှည့်သမားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ မျက်လှည့်ပွဲကို ၀ါးလုံးတိုင်ပေါ်မှာ ကျွမ်းဘားထိုးရင်း က ပြကြပါတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ ဆရာလုပ်တဲ့သူက သူ့ရဲ့လက်သင်တပည့်ဖြစ်သူကို ဒီလိုပြောပါတယ်။ “ကဲ…….ငါ့တပည့်၊ ငါ့ ပခုံးပေါ်တက်ပြီး ၀ါးလုံးတိုင်ကို တက်ပါ´´ပေါ့။ လက်သင်တပည့်ကလည်း ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း တိုင်ပေါ်ကို တက်သွားတဲ့အခါ ဆရာလုပ်သူက “အခု မင်းငါ့ကို ကာကွယ်ရင် မင်းကိုယ်မင်းလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်´´လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလို တစ်ဦးကို တစ်ဦး စောင့်ရှောက်ကာကွယ် ကြရင်ငါတို့ဟာ ငါတို့အလုပ်ကို ဘေးမသီရန်မခဘဲ ကောင်းကောင်း က ပြနိုင်မယ်။ ငါတို့လည်း ကောင်းကောင်းအကျိုးခံစားရမယ်။ မင်းလည်း အောက်ကို ဘေးမသီရန်မခဘဲ လုံလုံခြုံခြုံ စိတ်ချလက်ချ ပြန်ဆင်းနိုင်လိမ့်မယ်´´ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုဆရာကပြောတော့ တပည့်ဖြစ်တဲ့သူက “မဟုတ်သေးဘူး ဆရာ၊ ဆရာက ဆရာ့ကိုယ်ဆရာသာ ကာကွယ်ပါ။ ကျနော်က ကျနော့ဘာသာကျနော်ကာကွယ်မယ်ပေါ့။ ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်စီကာကွယ်စောက်ရှောက်မှသာ ကိုယ့်မှာ လုံခြုံစိတ်ချရမယ်။ ပွဲကိုလည်း ကောင်းကောင်း က ပြနိုင်မယ်´´လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘုရားရှင်ကတော့ အဲဒါနည်းလမ်းမှန်တယ် ဆိုပြီး မိန့်တော်မူပါတယ်။ ပြီးမှ ဘုရားရှင်က ဆက်ပြီး ဟောပုံမှာ တပည့်လက်သင်ပြောသလို မိမိကိုယ်ကို မိမိကာကွယ် ဆိုတာလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့သမာဓိအခြေခံကို ရအောင် ကျင့်ရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် သူတပါးကိုလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်ကြောင်းကို ဟောတော်မူပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ကတော့ ဘုရားရှင်က သံယုတ္တနိကာယ်မှာဟောထားပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲ ဦးတည်လိုက်ပါမယ်။ ယနေ့ခေတ် လူမှုရေးတာဝန်ဆိုတဲ့စကားကို အထူးအလေးပေး ပြောကြားကြရာမှာ လူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ပြောလိုရင်း အချက်ကို လေးနက်စေဖို့စာကိုးစာကား ထုတ်ပြောကြတဲ့အခါ ဒုတိယအကြောင်းဖြစ်တဲ့ “သူများကို ကာကွယ်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရာ ရောက်တယ်´´ဆိုတဲ့ စကားကိုသာ အကိုးအကားထုတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ဖက်သတ်ကိုးကားတာဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို အဓိပ္ပာယ်တလွဲကောက်ယူစေနိုင်ပါတယ်။ အခုအထက်က ပြောခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုမှာ ဘုရားရှင်က လက်သင်တပည့်ပြောတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကာကွယ်ပါ။ သူတပါးကို ဘေးရန်က ကာကွယ်ချင်ရင် ကိုယ့်ခြေလှမ်းကိုသာ ကိုယ်က ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီစကားမှာ ကိုယ့်ကိုကို ကာကွယ်ပါဆိုတာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ကိုယ်ကျင့်တရားအရ၊ ဘာသာရေးအရ ပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောကိုပြောတာပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်မှ သူတပါးကို ကာကွယ်ရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားရဲ့မှန်ကန်မှုဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ လက်တွေ့ကျတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောအရ ပြောရရင် ဒီသဘောဟာ သိပ်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။ ဥပမာဗျာ…… ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်က ဂရုစိုက်လိုက်တော့ ကိုယ်နဲ့နီးစပ်သူတွေအတွက်ရော၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်ပါ အထူးသဖြင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါမျိုး ကိစ္စမှာ ပိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်သမျှ ကိုင်သမျှကို ဂရုစိုက်ပြီး နေရင် သူများကိုပါ ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ သူများကိုပါ ရောဂါ အန္တရာယ် မကျအောင် ကူညီစောင့်ရှောက်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မစောင့်ရှောက်ပဲ သတိလက်လွတ် ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့နေလိုက်ရင် တခြားလူတွေကိုပါ ရောဂါကူးစက်ပြီး အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဥပမာအနေနဲ့ ကားဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ပဲဆိုပါတော့… သူလည်း ကားမောင်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပြီး သောက်စားခြင်းမရှိဘဲ ဂရုစိုက်မောင်းခြင်းအားဖြင့် သူတပါးကို ဘေးရန်ကျရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာ ကိုယ်ကသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ် ကာကွယ်နိုင်ရင် ဒီနည်းနဲ့ရော တခြားနည်းပေါင်းများစွာနဲ့ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရင်း သူတပါးကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရား မှန်ကန်ကြောင်းကို ကိုယ့်ကျင့်တရားအဆင့်မှာလည်း ကျနော်တို့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့် သူတပါးကို စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်း အတွက်ရော လူ့ဘောင်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါ မိမိရဲ့ အထိန်းအကွပ်မရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်၊ ရာဂ တက်မက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက် လုပ်မှသာ အများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ မကောင်းမှု အားလုံးရဲ့ ရေသောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တရားတွေကို ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ အတားအဆီးမရှိ ဖြစ်တည်ခွင့် ပြုထားရင်တော့ ဒီတရားတွေက အခြေခံပေါက်ဖွားလာတဲ့ မကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေဟာ တောထဲက နွယ်ရိုင်းတွေလို သစ်ကောင်းဝါးကောင်းတွေကို အသက်ရှူကျပ်လာအောင် လုပ်ပြီးသတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့အားလုံးက ဒီကိလေသာ ဒုစရိုက် အခြေခံတရား သုံးပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြရင် ဘ၀တူလူသားတွေအားလုံးဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့အတားအဆီးမရှိ ပိုင်ဆိုင်လိုမှု၊ အာဏာ တန်ခိုးကြီးလိုမှု၊ အထိန်းအကွပ်မဲ့နေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ တဏှာ၊ လောဘ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယစိတ်တွေရဲ့ အန္တရာယ်က ကင်းဝေးပြီး လုံခြုံစိတ်ချမှုကို ရကြမှာပါ။ ဒါမှသာ သူတို့ဟာ အနှောက်အယှက်ကင်းမယ်။ အဖျက်အဆီးကင်းစွာ၊ အသတ်အဖြတ်ကင်းစွား၊ မုန်းတီးမှုနဲ့ ရန်ငြိုးထားမှုက ကင်းစွာ၊ ပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေက ကင်းစွာ နေနိုင်ကြမှာပါ။
သူတပါးတို့အပေါ်သက်ရောက်သော ကျနော်တို့ရဲ့ လောဘနဲ့ ဒေါသအကျိုးဆက်တွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ လောဘနှင့်ဒေါသသားကောင်ဖြစ်ရသူအပေါ်တွင် အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါ။ လောဘနဲ့ဒေါသသည် ကူးစက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အကျိုးကို တိုးပွားများပြားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျနော်တို့ရဲ့ စိတ်မှာ လိုချင်တက်မက်မှု၊ လက်ရောက်ရလိုမှုမှတပါး အခြားကိစ္စကို မစဉ်းစားဘဲ ရဖို့၊ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဆုပ်ကိုင်မိဖို့ တွယ်တာစွဲလမ်းဖို့လောက်ကိုသာ အရေးထားစဉ်းစားနေပါရင် အဲဒိပိုင်ဆိုင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒဟာ သူတပါး ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပါ ရလို ပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ ဣဿာစိတ်ဓာတ်မျိုးအား ကောင်းစွာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ယုတ်မာညစ်နွမ်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေဟာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ နောင်လာနောင်သား ကလေးသူငယ်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရဲ့ အမြင်မှာ နမူနာယူစရာ၊ အတုယူစရာ အကျင့်သီလ စံနှုန်းများအဖြစ်သို့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အပြုအမူကို အခြားလူများကပါ နှစ်သက်သဘောကျပြီး လိုက်လုပ်ချင်လာအောင် အတုမြင်အတတ်သင်သဘောမျိုး လုပ်လာအောင် စိတ်ဓာတ်နှိုးဆော်ပေးသလို ဖြစ်ပြီး အဲဒီလူများက ကျနော်တို့ထက်ပင် သာအောင်ပြိုင်ဆိုင်ပြုလုပ်ချင်စိတ်များဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသာ လောဘ ရမ္မက်ကြီးသူ၊ ကာမဂုဏ်လိုက်စားကြူးသူများဖြစ်ကြလျှင် တခြားသူများကို အလိုရမ္မက်ကြီးသူများ ဖြစ်လာအောင် အလင်းတိုင်မီးညှိထွန်းပေးသလို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့အမုန်းဟာ တခြားလူများကိုလည်း မုန်းတတ်လာအောင် ရန်ငြိုးထားတတ်လာအောင် လှုံ့ဆော် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က သူများကိုလည်း မုန်းတီးစိတ် ၀င်အောင် ရန်ငြိုးထားလာအောင် ကူညီ အားပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလိုအခြေအနေမျိုးလေးမှာရှိနေတုန်း….ကျနော်တို့အားလုံးဟာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ကြပါစို့လိုက် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တချို့ ပြောကြပါသေးတယ်…“ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်နေရင် လောကကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့´´တဲ့ ဒါကို ပြောင်းပြန်လေးပြန်တွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ “လောကကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဖြစ်သွားမှလည်း လောကကြီးက မင်းကို ပြန်ဂရုစိုက်နိုင်မယ်´´ဆိုတာလေးကိုပါ။
တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ထာဝရသူငယ်ချင်း ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်ခြင်းအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ရှက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ယနေ့ခေတ်တွေစားနေတဲ့ မလုံတလုံဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးတွေ၊ လူကိုလူလိုမထင်ခြင်တဲ့ သဘောမျိုးလေးတွေကိုကာကွယ်ရင်း ပတ်ဝန်ကျင်းကို အလှဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း
Posted by chitmusic on May 9, 2010 in Uncategorized
Tags: ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလှဆင